Laanta socdaaljka oo gabaryar oo sanad iyo bar jirta u musaafurineeysa Israa’iil | Somaliska
Laanta socdaalka ee dalkaan Iswiidhan ayaa ku adkeeysaneeysa go’aan musaafurin oo ay horeey ugu riday gabar yar gabar yar oo 18 bilood jirta. Ka dib markii safaaradda Israa’iil ay diideey ineey siiso dhalashadda eheladeeda oo ah Israa’iilyiin.
Waalidka gabadhan dhalay oo heeysta dhalasho Israa’iil ah ayaa dalkaan Iswiidhan magangalyo weydiistay labbo sanno ka hor, hase ahaatee ay muddo gaaban ka dib dhalatay gabadhan yari. Tanina waxeey keentay isku dhac la xirriira qanuunka Iswiidhan iyo kan Israa’iil oo aan si isu waafaqeeyn. Sidoo kalena ay safaaradda Israa’iil diiday in gabadhaasi u aqoonsato ama ay siiso dhalashadda waalidkeeda. Gabadhan ayaa qarka u saaran ineey noqoto qof aan heeysan aqoonsi iyo dalka oo laga musaafuriyo.
“Gabadheeyda waxeey waayeeysa xaquuqdii caafimaad, waxbarasho iyo xorriyadeed” ayey tiri Nourseen hooyadeed oo la yiraahdo Zohana Salman oo ka wal walsan xaaladda gaabdheeda, islamarkaasina xustay in haddii lugu celiyo Israa’iil eeysan isku haleeyn karrin ammaanka halkaas tiiyo ay jirto sababta ay ugu soo carareen iyada iyo ninkeeda. Qareenka u doodaya qoyska gabadhaa yari oo la yiraahdo Gabriel Donne, islamarkaaisna ah nin qabiir ku ah arrimaha soo galootiga ayaa sheegay inuu aaminsan yahay waqtigan ay aad u yar tahay in lahelo sharci amaan ah oo loo helo magangalyo doonka. Wuxuu aad u dhaliilay sida laanta socdaalka u fekereeyso.